November 23, 2021 Eze Thaddaeus
Waxaa jira tiro jaamacado ah oo bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah ee adduunka oo idil maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa in loo oggolaado ardayda caalamiga ah inay wax ka bartaan jaamacadahaas iyo barnaamijyadooda deeq-waxbarasho oo dhameystiran gaar ahaan kuwa iyaga ka jira Mareykanka, UK iyo Kanada.
Maqaalkani wuxuu bixiyaa macluumaad si buuxda loo cusbooneysiiyay oo ku saabsan liiska jaamacadaha bixiya deeqaha waxbarasho ee buuxa ardayda caalamiga ah iyo haddii aadan maskaxda ku hayn wax dugsi ama goob waxbarasho ah, hagahan ayaa si isku mid ah kaaga caawin doona dugsiga aad doorato iyo meesha aad wax ku baranayso.
Adiga oo ah arday caalami ah, waxaad wax ku baran kartaa deeqo waxbarasho oo ay bixiyaan qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaal Mareykanka, Kanada iyo Boqortooyada Midowday si aad ugu sii wadato shahaadada koowaad ama shahaadada jaamacadeed.
Maqaalkan, waxaan diyaarinay liis jaamacadeed oo ka kala socda USA, Canada iyo UK oo bixiya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo loogu talagalay ardayda meel kasta oo adduunka ka mid ah iyada oo si buuxda loo maalgeliyo macnaheedu waa deeqda waxbarasho ayaa dabooli doonta khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada nolosha intaad joogto hay'adda.
Inta badan deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo waxaa la siiyaa ardayda leh waxqabadka tacliimeed ee ugu wanaagsan dugsigooda hore, waxay muujiyeen inay yihiin hal-abuur farshaxanka ama waxqabadyada isboortiga ama ardayda inkasta oo taariikh adag ay weli awoodaan inay si wanaagsan ugu qabtaan dugsiga.
Deeqdan ayaa la siiyaa ardayda noocaas ah si loogu dhiirrigeliyo shaqadooda adag isla markaana loo furo fursado waaweyn oo dhalaalaya oo sare u qaadi doona horumarkooda xirfadeed.
USA, UK iyo Kanada waa seddex ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee ardayda caalamiga ah ay ku sii wataan shaqooyinkooda tacliimeed maadaama ay yihiin kuwa si buuxda u horumarsan waddammada, waxay maalgashi ku sameeyeen waxbarashadda sidaas darteed waxay leeyihiin xarumo cilmi baaris heer sare ah iyo macallimiinta ugu fiican adduunka si ay u helaan shahaadada jaamacad ka mid ah dalalkan ayaa kugu aqoonsan doonta meel kasta oo aad tagtid.
Si aan kuu caawino waxaan diyaarinay liis jaamacadeed oo ku yaal USA, UK iyo Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah ee doonaya inay sii wataan shahaadada koowaad ama heerka labaad ee jaamacadeed.
1 Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah ee Maraykanka
1.1 Jaamacadda Clark Deeq waxbarasho oo caalami ah
1.2 Bariga Tennessee State University Deeqda Ardayda Caalamiga ah
1.3 Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Illinois Wesleyan
1.4 Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Mareykanka
1.5 Jaamacadda State University Jaamacadda Deeqda Caalamiga ah ee Merit
1.6 Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Michigan State
1.7 Jaamacadda New York Wagner Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
1.8 Jaamacadda Oregon Deeqda Ardayda Caalamiga ah
2 Jaamacadaha Ku Yaal Boqortooyada Midowday Oo Siiya Deeq waxbarasho Buuxda Ardayda Caalamiga ah
2.1 Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo dhameystiran Ardayda Caalamiga ah ee UK
2.1.1 Jaamacadda Cambridge Deeqda Ardayda Caalamiga ah
2.1.2 Jaamacadda Oxford Deeq waxbarasho oo caalami ah
2.1.3 Jaamacadda Bristol Deeqda Ardayda Caalamiga ah
2.1.4 Jaamacadda Westminster Deeqda Ardayda Caalamiga ah
2.1.5 Jaamacadda Cardiff Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
3 Ku saabsan Jaamacadaha Kanada oo bixiya Deeq waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah
3.1 Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
3.1.1 Jaamacadda Toronto, Lester B. Pearson Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
3.1.2 Jaamacadda York University Scholarships
3.1.3 Jaamacadda British Columbia Deeqda Ardayda ee Caalamiga ah
USA waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee wax lagu barto maadaama loo aqoonsan yahay waxbarashadeeda ugu sareysa ee caalamiga ah waxaana loo yaqaanaa daraasadaha ugu sareeya ee dibadda taas oo iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho ay ka caawisay arday badan inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho.
Boostadani waa liistada jaamacadaha ku yaal Mareykanka oo siiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah si ay u sii wataan shahaadada koowaad ama shahaadada sare iyo haddii aad ku jahwareersan tahay jaamacadda si aad wax uga barato USA boostadani waxay si cad u qeexaysaa taas sidoo kale.
Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah ee Maraykanka
Jaamacadda Clark Deeq waxbarasho oo caalami ah
Bariga Tennessee State University Deeqda Ardayda Caalamiga ah
Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Illinois Wesleyan
Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Mareykanka
Jaamacadda State University Jaamacadda Deeqda Caalamiga ah ee Merit
Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Michigan State
Jaamacadda New York Wagner Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda Oregon Deeqda Ardayda Caalamiga ah
Deeqda waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Clark waxaa loo yaqaan "Barnaamijka Culimada Caalamiga ah ee Clark”Waana u furan tahay arjiga ardayda caalamiga ah ee wax ka barata USA si ay u sii wataan barnaamij shahaadada afarta sano ah ee jaamacadda Clark iyo deeqda waxbarasho ayaa dabooleysa dhammaan kharashyada laga bilaabo khidmadaha waxbarashada illaa kharashyada nolosha.
Bariga Tennessee State University International Deeqda Ardayda
ETSU waxay bixisaa “Ardayda Caalamiga ah ee Deeqda Waxbarashada”Kaas oo u furan arjiga ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sii wataan shahaadada koowaad ama heerka labaad ee jaamacadda Bariga Tennessee State University. Deeqdani waxay daboolaysaa khidmadaha waxbarashada iyo dayactirka ee ardayga inta lagu gudajiray sanadka waxbarashadooda.
IWU waxay bixisaa tan deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah ku saleysan mudnaanta. Ardaydu waxay uqalmayaan iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda tacliimeed ee wanaagsan iyo natiijooyinka imtixaanka ee imtixaanka gelitaanka loo baahan yahay iyo deeqda waxbarasho waxay daboolaysaa afarta sano ee ay jaamacadda ku soo qaateen
AU waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah shahaadooyinka ku saleysan mudnaanta, taas oo ah, ardayda caalamiga ah ee leh diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah isla markaana si isku mid ah ugu fiicnaaday imtixaanka gelitaanka. Deeqda waxbarasho ee ay bixiso AU waxay daboolaysaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashka nolosha ee ardayga illaa dhamaadka daraasadda.
Jaamacadu waxay bixisaa mudnaanta deeqaha waxbarasho ee buuxa ee ardayda kuwaas oo muujiyey waxqabad tacliimeed oo heer sare ah, hal abuur leh waana inay lahaadaan waxqabad aad u wanaagsan mid ka mid ah meelaha soo socda; farshaxanka, xisaabta iyo sayniska, hoggaaminta, adeegga bulshada, waxqabadyada manhajka ka baxsan, ganacsiga ama hal-abuurnimada.
MSU waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo caalami ah ilaa xadidan ardayda caalamiga ah ee heerka koowaad iyo heerka labaad ee jaamacadeed waxayna taageeraan barnaamijka tacliimeed ee buuxa ee ardayga jaamacadda.
NYU waxay bixisaa deeq waxbarasho oo ku saleysan aqoon tiro kooban oo ardayda caalamiga ah oo muujiya waxqabad tacliimeed heer sare ah iyo hal-abuur dhinacyada waaweyn oo ay ku jiraan hoggaanka. Deeqdani waxay daboolaysaa waxbarashada buuxda ee ardayga.
Jaamacadda Oregon waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo caalami ah qiimo malaayiin doolar ah oo ku saabsan 35-40 ardayda caalamiga ah ee tartamaya si ay u sii wadaan qalinjabinta ama shahaadada jaamacadeed. Deeqdani waa mid ku saleysan qiimeyn waxayna daboolaysaa waxbarashada buuxda ee ardayga.
Dhammaan jaamacadahaan ku yaal Mareykanka waxay bixiyaan deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah sidaa darteed, waqti u qaado si aad baaritaan ballaaran ugu sameyso mid kasta oo ka mid ah jaamacadahaas adoo si toos ah ula xiriiraya sarkaalka aqbalaadda ee iskuulka kugu habboon adiga had iyo jeerna bilow bilowga codsiyadaada deeq-lacageedka.
Jaamacadaha Ku Yaal Boqortooyada Midowday Oo Siiya Deeq waxbarasho Buuxda Ardayda Caalamiga ah
Boqortooyada Ingiriiska waa mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee wax lagu barto maadaama qaybta waxbarashadu ay siiso waxbarasho tayo leh ardayda iyo muwaadiniinta ajaanibta ah.
Horaan qoraal ugu qornay deeq waxbarasho oo buuxda oo loo heli karo ardayda caalamiga ah inaad waliba iska hubin karto.
Waxaa jira tiro jaamacado ah oo ku yaal Boqortooyada Midowday oo bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah ee doonaya inay raacaan shahaadada koowaad ama shahaadada jaamacadeed.
Waxaan kuu diyaariyey liistada jaamacadaha noocaas ah si aad u kala doorato oo aad u bilowdo dalabkaaga deeqda waxbarasho.
Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo dhameystiran Ardayda Caalamiga ah ee UK
Jaamacadda Cambridge Deeqda Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda Oxford Deeq waxbarasho oo caalami ah
Jaamacadda Bristol Deeqda Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda Westminster Deeqda Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda Cardiff Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda Cambridge waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn uguna wanaagsan UK iyo adduunka guud ahaan sidaa darteed waxay ardayda siinayeen aqoon. Jaamacadu waxay la shaqaysaa barnaamijka deeqda waxbarasho ee Gates abaalmarin deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah iyadoo ujeedkeedu yahay in lagu sii wado shahaadada jaamacadeed ama shahaadada koowaad ee Jaamacadda Cambridge.
Deeqdani waa mid ku saleysan qiimeyn waxayna daboolaysaa waxbarashada oo buuxda, kharashyada nolosha iyo laba duulimaad oo heer sare ah mid laga helo jaamacadda iyo mid kale oo guriga lagu tago ka dib dhammaadka daraasadda jaamacadda.
Jaamacadda Oxford weli waa hay'ad kale oo sharaf leh oo ku taal Boqortooyada Midowday iyo adduunka oo dhan iyo ku biirista maalgelinta deeqda waxbarasho ee Rhodes House, jaamacaddu waxay siisaa deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo ardayda caalamiga ah ujeedadiisuna tahay inuu wax ku barto Oxford Jaamacadda si loo sii wado shahaadada koowaad ama heerka labaad ee jaamacadeed.
Jaamacadu waa mid adag oo lagu kasbado sidaa darteed ardayda codsata deeqda waxbarasho waa inay lahaadaan rikoodh tacliimeed oo aad u sarreeya maalgalintuna waxay daboolaysaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashka hoyga.
Jaamacadda Bristol waa mid ka mid ah Jaamacadaha Bixiya Deeqaha Buuxa ee Ardayda Caalamiga ah ee Boqortooyada Ingiriiska iyo jaamacaddu waxay ku jirtaa liiska jaamacadaha ugu fiican UK sidoo kale.
Deeqda waxbarasho ee ay bixisay Jaamacadda Bristol waxaa kaliya la siiyaa 5 ardayda caalamiga ah ee mustaqbalka leh ee leh rikoodhada tacliimeed ee ugu fiican isla markaana leh hal abuur ama karti badan. Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Bristol waxay dabooleysaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashka nolosha ee ardayga illaa iyo dhamaadka barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadeed.
Deeqda waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Westminster waa mid si buuxda loo maalgeliyo oo la siiyo ardayda caalamiga ah ee ujeedadeedu tahay inay wax ku bartaan Boqortooyada Midowday waa deeq waxbarasho oo ku saleysan sidaas darteed codsadayaashu waa inay lahaadaan rikoodh tacliin heer sare ah.
Deeqdani waxay daboolaysaa khidmadaha wax lagu barto, kharashka nolosha iyo xitaa tikidhada duulimaadka ee looga baxo London.
Jaamacadda Cardiff waa mid ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee UK isla markaana xubin ka ah kooxda Russell jaamacaddu wax badan ayey leedahay deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah kuwaas oo diyaar u ah inay sii wataan shahaadada koowaad ama shahaadada jaamacadeed. Sanduuqa deeqaha waxbarasho wuxuu daboolayaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashka nolosha.
Sidii aan horayba u soo sheegay waxaa jira jaamacado kooban oo ku yaal Boqortooyada Midowday oo bixiya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo arday caalami ah, liisaska aan soo ururiyey waa kuwo sax ah oo dalabka deeqaha waxbarasho ayaa wali socda oo aad adigu ku dalban karto.
Ku saabsan Jaamacadaha Kanada oo bixiya Deeq waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah
Kanada weli waa goobo kale oo waxbarasho oo heer sare ah oo adduunka ah, oo bixiya waxbarasho tayo leh oo arday kasta laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Kanada waxay bixiyaan deeq waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah ee ujeedkoodu yahay inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho ee Kanada waxaanan kuu soo uruuriyay liistada jaamacadahaas si aad u doorato midka adiga kugu habboon.
Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Jaamacadda Toronto, Lester B. Pearson Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadda York University Scholarships
Jaamacadda British Columbia Deeqda Ardayda ee Caalamiga ah
Jaamacadda Toronto oo kaashaneysa barnaamijka deeqda waxbarasho ee Lester B. Pearson ayaa ku abaalmarinaysa ardayga caalamiga ah deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo ka kooban khidmadaha waxbarashada iyo qiimaha nolosha. Codsadeyaasha barnaamijkan deeq-lacageedka waa inay lahaadaan rikoodh tacliimeed oo heer sare ah, hal-abuur leh oo waliba loo aqoonsan yahay inay yihiin hoggaamiyeyaal ka dhex jira dugsigooda ama beeshooda.
Ardayda u qalma waxay ku sii wadi doonaan shahaadada koowaad ama shahaadada koowaad ee Jaamacadda Toronto.
Deeqda waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee jaamacadda York waxaa la siiyaa ardayda muujiyey waxqabad tacliimeed heer sare ah isla markaana ujeedkoodu yahay inay ku sii wataan shahaadada koowaad ama heerka labaad ee jaamacadda York. Deeqda waxbarasho ayaa si buuxda loo maalgeliyaa, oo ka kooban khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada nolosha inta lagu jiro sanadka ardayga.
Jaamacadda British Columbia waa mid ka mid ah iskuulada ugu caansan Kanada isla markaana iskuulku wuxuu siiyaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah ee leh rikoodh tacliimeed heer sare ah oo ujeedkoodu yahay inay wax ka bartaan jaamacadda.
Maaddaama mid ka mid ah Jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah ee Kanada, abaalmarinta deeqda waxbarasho ayaa si buuxda loo maalgeliyaa iyadoo ka kooban khidmadaha waxbarashada iyo qiimaha nolosha.
Waxaa jira dhowr jaamacadood oo ku yaal Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ardayda caalamiga ah laakiin waxaa jira dhowr kaalmooyinka dhaqaale ee ay Kanada siiso ardayda caalamiga ah.
Gunaanad Jaamacadaha Siiya Ardayda Caalamiga ah Deeqaha waxbarasho
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay jaamacadaha bixiya deeqaha waxbarasho ee buuxa ardayda caalamiga ah xarumaha ugu waaweyn ee jaamacadaha ku yaal USA, UK iyo Kanada.
Halkaas waxaad ku leedahay liistada la soo ururiyey oo kaa caawin doonta inaad doorato jaamacad iyo goob waxbarasho oo kugu habboon adiga sidoo kale waxaad bilaabi kartaa dalabkaaga goor hore oo hubi inaad haysato dhammaan dukumiintiyada dalabka deeqaha ee lagama maarmaanka ah ee aad haysato.
deeq waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ahdeeqo buuxda oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee shahaadada jaamacadeed ee usaJaamacadaha Kanada oo Siiya Ardayda Caalamiga ah Deeq waxbarashoJaamacadaha Ku Yaal Boqortooyada Midowday Oo Siiya Deeq waxbarasho Buuxda Ardayda Caalamiga ahJaamacadaha Maraykanka oo Siiya Deeq waxbarasho oo buuxda Ardayda Caalamiga ahJaamacadaha Siiya Ardayda Caalamiga ah Deeqaha waxbarashojaamacadaha bixiya deeqaha waxbarasho ee buuxa ardayda caalamiga ah ee canadajaamacadaha bixiya deeqaha waxbarasho ee buuxa ardayda caalamiga ah ee uk
Previous Post:100 + Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada oo wata Shahaadooyin
Post Next:Liiska 20 Kulliyadood oo Madoow oo ku yaal Kanada
Pingback: Sida Loo Codsado Jaamacadaha UK - Tilmaamaha Tallaabada 2022
Pingback: 10 Dugsiyada Farshaxanka ee Kanada oo leh Deeqo waxbarasho
Pingback: Jaamacadaha Mareykanka ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah 2022 2022
Pingback: 8 Jaamacadaha ugu sarreeya Ireland ee Ardayda Caalamiga ah 2021
Khalid wuxuu leeyahay,
August 22, 2021 at 2: 37 pm
Dhamaan waad mahadsantihiin
Unwana Akpan wuxuu leeyahay,
August 27, 2020 at 8: 22 pm
Waxaan raadinayey deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyey tan iyo guul la'aan, waxaan rajeynayaa inaan heli doono mid markan ah. Halkan shaqo weyn ayaad ka wadaa, sii wad!
August 28, 2020 at 11: am 30
Waan ku faraxsanahay inaan caawin karno.
Victória Kiffer Rehfeld wuxuu leeyahay,
July 9, 2020 at 10: 05 pm
Lugbenwei Tamarabrakemi wuxuu leeyahay,
June 11, 2020 at 6: 40 pm
Runtii waan ku qanacsanahay haddii aan fursaddan helo, maxaa yeelay waligay riyadaydu way ahayd.
June 13, 2020 at 6: 46 pm
Waxaad la xiriiri kartaa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal boggan
Mukwezva aan waxba galabsan wuxuu leeyahay,
July 1, 2021 at 6: 56 pm
Iyada oo ixtiraam loo hayo waxaan runtii u baahanahay deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ????